Wafdi uu hogaaminayo Wasiir kuxigeenka Amniga soomaaliya oo Garoowe lagu soo dhoweeyey (Daawo/Sawiro) – Radio Daljir
Wafdi uu hogaaminayo Wasiir kuxigeenka Amniga soomaaliya oo Garoowe lagu soo dhoweeyey (Daawo/Sawiro)
Abriil 24, 2018 7:02 g 0
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Amniga ee dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada garoowe ee caasimada puntland .
wafdiga wasiirka waxaa kamid ahaa wasiirada amniga ee dawlada gooboleedyada .
wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf ayaa soo dhoweeyey wafdiga . wuxuuna sheegay in ay puntland muhimad weyn ugu fadhido shirweynaha amaanka soomaliya looga tashanayo .
shirkan amaanka soomaaliya ee beri ka furmaya garoowe waxaa lagu soo qaadi doonaa sidii laysaga kaashan lahaa arimaha amaanka soomaaliya .
Halkan hoose ka daawo muuqaalka shirka Jaraaid.